အမိုက်စားနှစ်သစ်ပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်အချို့ - ဒိုးမယ်
မကြာခင်မှာပဲ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကြီးကုန်ဆုံးလို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ ရုံးပိတ်ရက် ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဘယ်ဆိုင်ကိုသွားကြမလဲ ပလန်ချနေကြပြီလား? ပလန်ချချင်နေပေမဲ့ ဘယ်ကိုသွားလို့သွားရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ ဒီမှာ အလန်းစားပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင် list ရှိတယ်နော်!
သွားတော့သွားချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်သွားရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့ foodie တို့ရေ.. ခေါင်းခြောက်ခံမနေတော့ဘဲ နှစ်သစ်ကူးပရိုမိုးရှင်း ခပ်မိုက်မိုက်လေးတွေရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင် list ကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ဦး။ ဘယ်ဆိုင်တွေလဲဆိုတာ အခုပြောပြပေးမှာနော်။
ဘယ်လိုပရိုမိုးရှင်းလဲဆိုတော့ Buy 1 Get 1 တဲ့။ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်ကနေပြီး ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့အထိဆိုတော့ ခပ်သွက်သွက်လေးသာ ပြေးပေတော့ပဲ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး public နဲ့ check in တင်ပေးရုံနဲ့ Ramen ပွဲအကြီးတစ်ပွဲစားရင် အဲ့အမျိုးအစား Ramen ပွဲအကြီးတစ်ပွဲ၊ အသေးဆိုရင်လည်း အမျိုးအစားတူတဲ့ပွဲသေးတစ်ပွဲရမှာတဲ့.. Take away ယူသွားလို့တော့မရတာမို့လို့ ဆိုင်မှာတင် အပီအပြင်စားခဲ့ဖို့ ကြိုအသိပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိုမိုးရှင်းပေးနေတဲ့ဆိုင်လိပ်စာလေးကတော့ အနော်ရထာလမ်းနဲ့ ၁၂ လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်ပါ။
Yatha Stick Hotpot
ပင်လယ်စာချစ်သူတွေအတွက် ပင်လယ်စာပွဲမိုက်မိုက်လေးတွေရတဲ့ ဒီဆိုင်လေးရဲ့ပရိုမိုးရှင်းကာလကတော့ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၄ ရက်နေ့အထိပါ။ မီနူးအားလုံးကို 25% discount ပေးမှာတဲ့။ လိပ်စာကတော့ မြောက်ဥက္ကလာ ဝေပုလမှတ်တိုင်နားမှာပါ.. ဟော့ပေါ့နဲ့ မာလာရှမ်းကောစားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီဆိုင်လေးက အဆင်ပြေတယ်နော်။
ပီဇာမှ ပီဇာဆိုရင်လည်း pizzamaru မှာ ပီဇာတစ်ချပ်နဲ့ ကြက်ကြော်တစ်ပွဲမှာတိုင်း ပီဇာတစ်ချပ် ဒါမှမဟုတ် ကြက်ကြော်တစ်ပွဲထပ်ရမဲ့ ပရိုမိုးရှင်းရှိနေပါတယ်နော်။ ပရိုမိုးရှင်းက ၃၁ ရက်နေ့နောက်ဆုံးမို့လို့ နှစ်မကုန်ခင်လေး မြန်မြန်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လိပ်စာက မြန်မာပလာဇာ တတိယထပ်မှာပါ။
Pizza Hut ကလည်း နှစ်သစ်ကူးပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့ ဘယ် Ala Carte Menu ကိုမဆို 40% တောင် discount ချပေးမှာတဲ့နော်.. ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ကနေ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ၂ ရက်တည်းလုပ်မှာမို့လို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့နီးတဲ့ pizza hut ဆိုင်ကို အမြန်ပြေးဖို့ပြင်ပေတော့ပဲ။
ကဲ ဗိုက်ပြည့်မဲ့ဆိုင်တွေအကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ အချိုတည်းဖို့အတွက် Times City, Jewelry Mall, 5th Floor က Boba House ရဲ့ Buy 1 Get 1 ပရိုမိုးရှင်းအလှည့်ပေါ့။ သူက New year promotion မဟုတ်ဘဲ Grand Opening promotion ဆိုပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ အထိပရိုမိုးရှင်းရှိနေသေးတော့ ထည့်ရေးပေးလိုက်တယ်။